“Horyaalka Premier League kama bixi doono gacmaheena” – Raheem Sterling – Gool FM
“Horyaalka Premier League kama bixi doono gacmaheena” – Raheem Sterling
(England) 16 Maarso 2019. Xidiga kooxda Manchester City ee Raheem Sterling ayaa fariin adag u dirtay kooxdiisii hore ee Liverpool, taasoo ku aadan loolanka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Raheem Sterling ayaa carabka ku adkeeyay in qof walba ee ku sugan kooxda Manchester City ay xiiseeneyso ku guuleysiga horyaalka Premier League.
Dhinaca kale Raheem Sterling ayaa sheegay in kooxdiisa Sky Blues ay sidoo kale isku dayi doonto ku guuleysiga tartanka Champions League markii ugu horeysay.
Kooxda Skye Blues ayaa hogaanka kaga heysa hal dhibac horyaalka Premier League dhigeeda Liverpool, xili sidoo kale ay u gudbeen wareega siddeeda ee tartanka Champions League, halkaasoo ay ku wajihi doonaan Tottenham Hotspur.
Hadaba Raheem Sterling ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku yiri:
“Waxaan hogaamineynaa horyaalka Premier League, laakiin isla xiligaas kuma mashquuli doono cida nagu soo xigta, kulan kasta ee aan ciyaareyno, waa inaan ka fikirnaa kaliya waxa aan qabaneyno”.
“Liverpool waa koox weyn, hadii aadan fiicneyn, isla markaana aadan bixinin qaab ciyaareed fiican, waa hubaal inay ku ciqaabayaan”.
“Hada waxaan hogaamineynaa horyaalka Premier League, wax walbana anaga ayay nagu xiran yihiin oo waxay ku jiraan gacmaheena”.